Ecuador waxay lumisay 54% barafkeeda ilaa 1980 | Saadaasha Shabakadda
Barafleyda adduunka ayaa dhalaalaya sababo la xiriira kuleylka adduunka. Waqtiga xaadirka ah, daboolka glacier ee Ecuador waxaa laga dhimay 54% ilaa 1980, oo ka socota 92 kiiloomitir oo laba jibbaaran illaa hadda oo ah 43 kiiloomitir oo isku wareeg ah
Baadhitaan ay sameeyeen Ecuadorian Bolívar Cáceres oo ku taal Quito iyada oo loo marayo qaab dhismeedka kulanka khubaro ka socda Golaha Dawlad Goboleedka ee Isbadalka Cimilada (IPCC) ayaa muujinaya xog aad u cajiiba oo ku saabsan dhalaalida barafka. Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato?
1 Yareynta daboolka glacier
2 Shirka IPCC
3 Horumarka la dedejiyey ee kuleylka adduunka
Yareynta daboolka glacier
Isku-dheelitirka barafka ee Ecuador waxaa lagu cabiraa habka soo socda. Waxaa jira 7 dabool baraf oo dul saaran fulkaanaha. Tani waxay muujineysaa inay jiraan 110 luqadood oo baraf leh. Isbeddelka cimilada ayaa saameyn badan oo taban ku leh meelo kala duwan oo Dunida ka mid ah, taasi waa, kuma wada saameynayo dhammaan meelaha si siman.
Ecuador, astaamaha marinka isbeddelka cimilada ayaa ka sii cad marka la arko in aaggan 80-meeyadii uu lahaa 92 kiiloomitir oo laba jibbaaran, halka xilligan ay tahay oo keliya 43 kiiloomitir oo laba jibbaaran.
Waan haysanay luminta qiyaastii boqolkiiba 54 ee daboolka glacier muddo 60 sano ah. Waa tilmaan cad oo kooban oo ku saabsan sida barafku uga jawaabo isbeddelka cimilada ”, ayuu yiri, inkasta oo uu siiyay qayb yar oo ka mid ah hoos u dhigista geeddi-socodka dabiiciga ah ee dabiiciga ah ee ay soo mareen barafleyda buuraha, taas oo" waxqabadka bani'aadamku si xawli ah ku socday ".
Iyadoo wajahaysa xaaladda dhalaalka dhalaaleyda dhow iyo cawaaqibkeeda sare u kaca heerka badda ee heer caalami, Khabiiro IPCC ah oo ka kala socda in ka badan 30 dal oo adduunka ah Waxay ku kulmeen caasimada Ecuador si ay ula wadaagaan daraasadaha iyo cilmi baarista lagu sameeyay badaha iyo cryosphere, oo ah tilmaamayaasha isbedelka cimilada.
Kulanku wuxuu martigaliyay 125 saynisyahano ka socda IPCC waxayna kaqeybgalayaashu soo bandhigayeen cilmi baaristooda usbuuca oo dhan badda iyo cryosphere Qaybta 'cryosphere' waa qeyb ka mid ah dusha sare ee dhulka oo ay biyuhu ku sugan yihiin xaalad adag sida barafka badda ama glaciers, waana astaamaha deegaanka ee lagama maarmaanka u ah falanqaynta cimilada oo bini'aadamku ay ku tiirsan yihiin.
Arrinta badda iyo cryosphere waxay aasaas u noqotay baaritaanno badan oo adduunka ka dhacay, taas oo ay ugu wacan tahay xaqiiqda ah inay si cad uga tarjumayaan sida isbeddelka cimilada uu u saameynayo qaab taban.
Warbixinta ayaa la filayaa in la daabaco bisha Abriil ee sanadkan waxayna ka caawin doontaa dowladaha inay go’aan gaaraan markay abuurayaan siyaasado ku saleysan sayniska kuwaas oo gacan ka geysanaya sidii loo wanaajin lahaa ilaha dhaqaalaha ee wajahaya xaaladaha isbedelka cimilada.
Horumarka la dedejiyey ee kuleylka adduunka
American Ko Barret, oo ah ku xigeenka maamule cilmi baarista ee National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) iyo shan iyo toban sano xubin firfircoon oo ka tirsan IPCC ee ay ka ahayd madaxweyne ku xigeenka, waxay xaqiijisay in diirimaadka aduunku uu yahay wax muuqda isla markaana xilligan aysan waxtar lahayn in la diido. .
“Dabcan waxaa jira kuleyl, dhammaan daraasadihii taxanaha ahaa soddonkii sano ee la soo dhaafay waxay muujinayaan horumar tartiib tartiib ah kululaynta Dunida oo dhan”, Wuxuu ku doodaa kahor saynisyahanada qaarkood oo dhaha inay jiraan aagag halka dhacdooyinka kasoo horjeedaa ay ka dhacaan.
Arrimaha ay ka hadlayaan saynisyahannadu ee ku saabsan diirimaadka adduunka waxay isku dayayaan inay daboolaan inta ugu badan ee suurtogalka ah, laga bilaabo buurta ugu dhaadheer ee buuraha leh illaa gunta badda.
Qaar ka mid ah gobollada ugu nugul isbeddelka cimilada, sida meelaha qaarkood ee Arctic iyo aagga buuraha dheer, waa in si qoto dheer loo daraaseeyo, maaddaama yaraynta barafku ay dhibaato noqon karto sababo la xiriira kororka heerka badda ee miisaanka caalamiga ah. Kuwani waa gobollada adduunka oo dhan oo runtii ku socda isbeddel muuqda oo wax ka beddelaya dhammaan dhacdooyinka la arkay illaa 50 sano ka hor.
Sidaad u aragto, barafyada Ecuador waxay ku dhalaalayaan si dhakhso leh tanina waxay yeelan doontaa cawaaqib xumo mustaqbalka dhow.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Ecuador waxay lumisay 54% barafkeeda ilaa 1980
Jasiiradaha Balearic waxay doonayaan inay u istaagaan isbedelka cimilada iyagoo mamnuucaya gawaarida naaftada laga bilaabo 2025